“Verification post to the Super 8 Ball Club” — Steemit
zarmanizawlinn (53) in super8ballclub • last year (edited)
"မင်္ဂလာပါ စတီးမစ် မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျား"
ယမန်နေ့က ကျွန်တော်ဟာ စတီးမစ်ဘလော့ချိန်း စနစ်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် Game လေးတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီGame လေးဟာ ကျွန်တော်တို့ကို Steem Rewards တွေ ပေးနေပါတယ်။ ဒီ Game လေး အမည်က The Super 8 Ball Club ပါ။
ဒီGame လေး ကို Google PlayStore မှာ download ဆွဲကာ မိမိတို့ဖုန်းမှာ အကောင့်လျှောက်က်ပြီးရင် Verify ဖြစ်ရန်အတွက် Post တစ်ခု တင်ပေးရပါမယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ (RP60) ...ကျွန်တော့ရဲ့ RP ဟာ 60 အောက်မှာရှိနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်တိုင်ဓါတ်ပုံတွင် Steemit username နှင့် Game tracking name တို့ကို selfie တစ်ခုတည်ဆောက်၍ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်၏ Game play account အား verify ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့် - @zarmanizawlinn
Verification post to the Super 8 Ball Club
I met yesterdayafantastic new game on the Steem blockchain.
The Super 8 Ball Club,agame that gives you rewards!.
As my STEEM account reputation is less than < 60, I have to takeaselfie with my STEEM username and game tracking name to verify my account.
With best Wishes - @zarmanizawlinn
Game Name - zarmanizawlinn
စည်းကမ်းချက်နှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါ မူရင်းလင့်မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
https://steemit.com/gaming/@princewahaj/introducing-super8ballclub-the-first-ever-multiplayer-based-pool-game-for-android-powered-by-steem-blockchain-using-playfab-and ( Credit Post writer - @princewahaj )
Myanmar Steemit မိသားစုဝင်​အားလုံး ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​ချမ်း​မြေ့ကြပါ​​စေ။
super8ballclub gaming steemit myanmar
nyinyiwin (61) · last year (edited)
Welcome !! @zarmanizawlinn Myanmar Super8ball community မှ ကြိုဆိုပါတယ် ။
မြန်မာ 8ဘော ကွန်မြူနတီ ကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
I'm also member of super8ballclub and I wish to approve @zarmanizawlinn 's veerification post for super8ballclub.
Release the Kraken! You gota28.39% upvote from @seakraken courtesy of @zarmanizawlinn!
သူလည်း 8 ballဘဲ